Taundi unozvikudza vaviri achirova mahombekombe uye kwazvo muguta rekare. Vanhu vazhinji endai Sorrento, kwete nokuti gungwa uye zvinotyisa mawere, asi nhoroondo. Sorrento zvechokwadi quintessential Italian guta rekare. Zviri duku zvikuru pane Naples uye ane kuti Italian mweya maguta vechokwadi vekare duku chete Italian zasi anogona kuva.
Unoda embed yedu Blog romukova “7 Day Best Trips From Naples In Italy” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/best-day-trips-naples/ ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Daytrips europetravel italyvacation Naples napoli Tranride chitima mazano travelitaly traveltips